Dagaalkii magaalada Berbera ee Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Video – Xeernews24
Dagaalkii magaalada Berbera ee Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Video
Dagaalkii Berbera ee Ingiriiska iyo Talyaaniga
W/Q Yusuf Garad
Waa Majalad soo baxday muddo hadda laga joogo 78 sano.
Sawirkani waa Jaldiga kore ee Majalad soo baxday 28 March 1941. Waa bartamihii dagaalka labaad ee Adduunka. Majaladda waxaa magaceeda la yiraa The WAR, oo macnaheedu yahay dagaalka.
Dusha kore sida aad aragteen waxaa ku sawiran goob dagaal oo xeeb ah waxaana ku qoran erayada ah – Empire Troops Recapture Berbera.
Waxaa ku hoos qoran:
Saacadihii muggdiga ahaa ee arooryadii March 16, Maraakiibta Dagaalka ee Britain iyo kuwa ciidanka qaada ayaa sanqar la’aan ku sulaaxay xeebta Biritish Somaliland [dhulka Soomaaliyeed ee Britishka], oo toddoba bilood ay haysteen Talyaanigu.
Markay tahay Eber Saac [saacaddii ay ahayd in uu howlgalku billaabmo] ayay maraakiibta dagaalku billaabeen duqeyn. Ka dibna labada ciidan oo mid yahay Hindi xul ah, midka kalena uu ka kooban yahay Soomaali iyo Carabta Cadan ay u daateen xeebta Galbeed iyo tan Bari ee magaalada.
Farshaxankayagu wuxuu sawirkan ku muujiyay mid ka mid ah u daadashadii xeebta oo dusha ay ka daafacayaan madaafiicda maraakiibta ciidanka badda iyo dayaaradaha Ciidanka Cirka ee Boqortooyadu.
Berbera waxay markaas ahayd caasimadda dhulka Soomaaliyeed ee Britishka.
Caddadkaan Majaladda The WAR, waxaa muddo hadda laga joogo dhowr iyo toban sano i siiyay nin aan markaa wada shaqeyneynay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/07/barbara.jpg 960 720 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-07-16 10:07:302019-07-16 10:07:30Dagaalkii magaalada Berbera ee Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Video
Ganacsatada Somaliland Ee Xoolaha u Dhoofiya Dalka Cumaan Oo Lagu Qasbay Inay... Xogta Dahsoon Sababta Sacuudigu u soo celinaayo mucaaradka